Ezekieri 47 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
47 Zvino akazondidzosa kusuo reImba yacho,+ uye tarira! mvura+ yakanga ichibuda pasi pechikumbaridzo cheImba yacho nechokumabvazuva,+ nokuti Imba yacho yakanga yakatarira kumabvazuva. Mvura yacho yakanga ichidzika ichibva nechepasi, ichibva kurudyi rweImba yacho, kumaodzanyemba kweatari. 2 Akazondibudisa nenzira yokugedhi rokuchamhembe,+ akapota neni nenzira yokunze inoenda kugedhi rokunze rakatarira nechokumabvazuva,+ uye tarira! mvura+ yakanga ichiyerera ichibva kurutivi rwokurudyi. 3 Murume wacho paakaenda nechokumabvazuva aine tambo yokuyeresa muruoko rwake,+ akayerawo makubhiti chiuru, akaita kuti ndiyambuke nomumvura, mvura yaisvika muzviziso zvemakumbo. 4 Akayerazve makubhiti chiuru, akabva aita kuti ndiyambuke nomumvura macho, mvura yaisvika mumabvi. Akayerazve makubhiti chiuru, akabva aita kuti ndiyambuke—mvura yaisvika muhudyu. 5 Akayerazve makubhiti chiuru. Rwakanga rwava rukova rwandaisakwanisa kuyambuka, nokuti mvura yakanga yakwirira, mvura yaitoda kuti uite zvokushambira, rwava rukova rwaisayambukika. 6 Zvino akati kwandiri: “Haiwa iwe mwanakomana womunhu, waona izvi here?” Akabva aita kuti ndifambe, akaita kuti ndidzokere kumahombekombe orukova rwacho. 7 Pandakadzokera, ndakaona kumahombekombe kworukova rwacho kuine miti mizhinji kwazvo, kurutivi rwuno nokurutivi urwo.+ 8 Akati kwandiri: “Mvura iyi iri kuenda kunzvimbo iri kumabvazuva uye ichayerera nomuArabha.+ Iyo ichasvika kugungwa.+ Painodirwa mugungwa,+ mvura yaro ichabva yaporeswawo. 9 Mweya yose mipenyu inofamba yakawanda,+ iri munzvimbo dzose dzichasvika rukova urwu rwakakura zvakapetwa nekaviri, ichawana upenyu. Kuchava nehove zhinji kwazvo, nokuti ndiko kuchasvika mvura iyi, uye mvura yomugungwa ichaporeswa,+ uye zvinhu zvose zviri munzvimbo ichasvika rukova rwacho zvichava zvipenyu. 10 “Zvino vabati vehove vachamira murutivi marwo kubvira kuEni-gedhi+ kusvikira kuEni-egraimu. Pachava nenzvimbo yokuomesera mambure okukukudzisa. Hove dzacho dzichavapo maererano nemarudzi adzo, sehove dzomuGungwa Guru,+ zhinji kwazvo. 11 “Kune nzvimbo dzaro dzine machakwi nenzvimbo dzaro dzine matope, uye hadzizoporeswi.+ Dzicharegwa kuti dzive munyu.+ 12 “Mumativi orukova rwacho, mumahombekombe arwo kurutivi rwuno nokurutivi urwo, muchamera miti yemarudzi ose inodyiwa.+ Mashizha ayo haazosvavi,+ uye zvibereko zvayo hazvizoperi.+ Ichabereka michero mitsva mumwedzi yayo, nokuti mvura yayo—inobva munzvimbo tsvene.+ Zvibereko zvayo zvichava zvokudya uye mashizha ayo achava okuporesa nawo.”+ 13 Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Iyi ndiyo nharaunda yamuchazvipa kuti ive nhaka, kuti ive nyika yemadzinza gumi nemaviri aIsraeri, Josefa achipihwa nzvimbo mbiri dzenyika yacho.+ 14 Imi munofanira kuigara nhaka, mumwe nomumwe achiwana zvakaenzana nehama yake, iyo nyika yandakasimudzira ruoko rwangu ndichipika+ kuti ndichaipa madzitateguru enyu;+ uye nyika iyi ichava nhaka yenyu muchiita zvokukanda mijenya.+ 15 “Uyu ndiwo muganhu wenyika yacho kurutivi rwokuchamhembe, kubvira kuGungwa Guru pedyo nenzira inoenda kuHetroni,+ kana munhu achienda kuZedhadhi,+ 16 Hamati,+ Bherota,+ Sibraimu, iri pakati pomuganhu weDhamasiko+ nomuganhu weHamati; Hazeri-hatikoni, iri nechokumuganhu weHaurani.+ 17 Muganhu unobva kugungwa uchava Hazari-enoni,+ muganhu wokuDhamasiko nokuchamhembe—zvichienda kuchamhembe, uye muganhu weHamati.+ Urwu ndirwo rutivi rwokuchamhembe. 18 “Rutivi rwokumabvazuva runobvira pakati peHaurani+ neDhamasiko+ uye pakati peGiriyedhi+ nenyika yaIsraeri; uchitevedza Jodhani,+ munofanira kuyera kubvira kumuganhu kusvikira kugungwa rokumabvazuva. Urwu ndirwo rutivi rwokumabvazuva. 19 “Rutivi rwokumaodzanyemba ruri kumaodzanyemba, kubvira kuTamari+ kusvikira kumvura yeMeribhati-kadheshi,+ mupata une rukova+ kusvikira kuGungwa Guru. Urwu ndirwo rutivi rwokumaodzanyemba, nechokuNegebhu. 20 “Rutivi rwokumavirira iGungwa Guru, kubvira pamuganhu kuenda mberi kumuganhu weHamati.+ Urwu ndirwo rutivi rwokumavirira.” 21 “Munofanira kugovana nyika iyi, zvinoenderana nemadzinza gumi nemaviri aIsraeri. 22 Munofanira kuigovana kuti ive nhaka yenyu+ neyevatorwa vanogara pakati penyu,+ vakabereka vanakomana vari pakati penyu. Ngavave somunhu womunyika yenyu pakati pevanakomana vaIsraeri. Vachava nenhaka pamwe chete nemi pakati pemadzinza aIsraeri pachiitwa zvokukanda mijenya.+ 23 Munofanira kupa mutorwa wacho nhaka yake mudzinza raanogara,” ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.